Dayactirka shaashadda Galaxy Fold ayaa ku kici doonta 135 euro | Androidsis
Toddobaadkii hore ayaa Galaxy Fold laga bilaabay suuqyo kala duwan oo ku yaal Yurub, bilo sugitaan kadib. Nooca Kuuriya ayaa ugu dambayntii si rasmi ah u iibinaya taleefankiisa isku laaban. Si looga fogaado dhibaatooyin la mid ah kuwii dhacay bishii Abriil, Samsung waxay sidoo kale sii deysay fiidiyoow ay ku jirto tus sida loo daryeelo taleefanka.
Mid ka mid ah cabsida isticmaaleyaal badan oo doonaya inay iibsadaan Galaxy Fold waa kharashka dayactirka shaashadda, maxaa yeelay waa qayb aad xasaasi u ah taleefankan. Ugu dambeyntii, kharashkaan waa la shaaciyey, markaa waan ognahay inta lagu bixin lahaa kiiskaas.
Waxaa laga baqay in kharashka ku baxa dayactirka shaashadda Galaxy Fold uu aad u sarreeyo. Inkasta oo xogta la soo bandhigay ay muujineyso qiimaha la sheegay, ee ah bedelka shaashadda, waxay noqon doontaa 149 dollar. Isbeddelku wuxuu ku saabsan yahay 135 euro, sidaas darteed waa qiimo la yaab leh oo qiimo yar oo taleefanka nuucaan ah.
In kasta oo ay tahay qiimo ka hooseeya sida ay dad badani filayaan, haddana waxa jira soo qabasho arrintan ku saabsan. Tan iyo markii beddelka shaashadda sida ku kooban yahay hal adeegsi halkii iibsade taleefanka. Markaa waxaad beddeli kartaa shaashadda taleefankaaga hal mar oo keliya, haddii ay waxyeello soo gaarto.
Haddii ay dhacdo in shaashadda Galaxy Fold mar kale jabto, qiimaha la bixinayaa aad ayuu uga sii badnaan lahaa. In kasta oo xilligan aan wax xog ah laga bixin waxa ku dhici lahaa xaaladdan qiimaha ay tahay inay isticmaalayaashu bixiyaan. Laakiin waxaa lagu qiyaasaa inay u dhexeyso $ 300 ilaa $ 400 kiiskan.
Marka kharashka ugu horreeya ee lagu dayactirayo shaashadda Galaxy Fold ma aha mid aad u sarreeya sidii looga baqay. Sidaa darteed, waa war wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha qorsheynaya inay iibsadaan tusaalahan. Sidaad ogtahay, bilaabashadeeda Spain wuxuu dhici doonaa bartamaha Oktoobar, sida ay xaqiijisay shirkadda Samsung lafteeda toddobaadyo ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Waxaan horey u ogaanay inta ay ku kacayso dayactirka shaashadda Galaxy Fold